# 1 Ifulethi Elinekamelo lokulala e-Uruguay Building - I-Airbnb
# 1 Ifulethi Elinekamelo lokulala e-Uruguay Building
Ifulethi lijabule kakhulu futhi linokukhanya okuningi. Ingaphansi kwamamitha angu-300 ukusuka ebhishi. I-Casino Conrad iyibanga lemizuzu engu-4 uma uhamba ngemoto, i-Supermarket ikude ngemizuzu engu-2, futhi indawo ezungeze amadolobha amakhulu ithule kakhulu futhi ingasetshenziswa.
I-Spanish: Sisanda kuthuthukisa efulethini ngokucabangela ukusikisela kwezivakashi zethu. Sishintshe i-heater yamathangi yaba yelinye elinamandla angaphezulu ukuze sinciphise isikhathi sokuphumula phakathi kwegumbi lokugezela ngalinye.
Siphinde sashintsha umshini wokomisa izinwele wakudala. Egunjini lokulala sifake i-32 ”nesitudiyo esengeziwe ukuze sithuthukise ukunethezeka kwezivakashi zethu.
IsiNgisi: Muva nje sithuthukise emnyangweni ngokucabangela ukusikisela kwezivakashi zethu. Sishintshe i-heater yamanzi ngelinye lamandla amakhulu ukunciphisa isikhathi sokuphumula phakathi kokugeza ngakunye. Siphinde sashintsha nomshini wokomisa izinwele wakudala. Ekamelweni lokulala sifaka u-32 ”kanye nesifundo esengeziwe sokuthuthukisa ukunethezeka kwezivakashi zethu.
IsiNgisi: Sisanda kuthuthukisa emnyangweni ngokucabangela ukusikisela kwezivakashi zethu. Sishintshe ithangi lokushisisa amanzi laba elinye lamandla aphakeme ukuze sinciphise isikhathi sokuphumula phakathi kokugeza ngakunye. Siphinde sashintsha umshini wokomisa izinwele wakudala, sanezela i-heater engu-32 ”kanye ne-heater eyengeziwe ukuze sithuthukise ukunethezeka kwezivakashi zethu.
I-Spanish: Nakuba ngingaphenduli edolobheni siyatholakala ngomyalezo nganoma yisiphi isidingo izivakashi zethu ezinaso futhi sihlale siphendula ngokushesha ngangokunokwenzeka! Ngaphezu kwalokho, isakhiwo sinokwamukelwa lapho izivakashi zethu zingena/ziphuma kalula futhi ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, lokhu kwamukelwa kuzokuhambela nganoma yisiphi esinye isidingo esivela ngesikhathi sokuhlala kwakho.
IsiNgisi: Nakuba ngingekho edolobheni siyatholakala ngomyalezo nganoma yisiphi isidingo izivakashi zethu ezingase zibe nazo futhi sihlale siphendula ngokushesha ngangokunokwenzeka! Ngaphezu kwalokho, isakhiwo sinokwamukelwa lapho izivakashi zethu zingangena khona/ ziphume kalula futhi ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, lokhu kwamukelwa kuzokusiza nganoma yisiphi esinye isidingo esingase sivele ngesikhathi sokuhlala kwakho.
IsiPutukezi: Nakuba ngingekho edolobheni, siyatholakala ngomyalezo nganoma yisiphi isidingo izivakashi zethu ezinaso futhi sihlale siphendula ngokushesha ngangokunokwenzeka! Ngaphezu kwalokho, isakhiwo sinokwamukelwa lapho izivakashi zingangena khona kalula futhi ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, lokhu kwamukelwa kuzokusiza nganoma yiziphi ezinye izidingo ezingase zivele ngesikhathi sokuhlala kwakho.
I-Spanish: Nakuba ngingaphenduli edolobheni siyatholakala ngomyalezo nganoma yisiphi isidingo izivakashi zethu ezinaso futhi sihlale siphendula ngokushesha ngangokunokwenzeka! Ngap…